नेपाल आज | ‘बुटिक एअरपोर्ट’ भनेको के हो ?
समाचार अर्थ पर्यटन मुख्य समाचार समाज
‘बुटिक एअरपोर्ट’ भनेको के हो ?
बुधबार, १३ चैत २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । सामान्य अर्थमा ‘बुटिक’ भन्ने शब्द महंगा वस्तु विशेषगरी गहना विक्री गर्ने पसलहरुमा प्रयोग हुन्छ । ‘बुटिक सप’ भन्नाले महँगा वस्तु विक्री हुने साना खाले पसल भन्ने बुझिन्छ । बुटिक होटलको पनि प्रचलन १९८० को दशकबाट शुरु भयो । बुटिक होटलहरु नेपालमा पनि खुल्न थालेका छन् । साना र क्वालिटी सेवा दिने होटलहरुलाई पनि बुटिक होटल भन्ने गरिन्छ । जसमा ५० देखि १०० वटासम्म कोठा हुने गर्छन् ।
नेपालमा भने यतिबेला बुटिक विमानस्थलको चर्चा छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एअरपोर्ट बनाउने अभियानअन्तर्गत विभिन्न कामहरु भइरहेका छन् । आखिर बुटिक एअरपोर्ट भनेको चाहिँ के हो त ? नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्री भन्छन्, ‘ नेपालीपन, नेपाली मौलिकता झल्किने विमानस्थल बनाउन खोजेका छौं । त्यसैलाई ‘बुटिक एअरपोर्ट’को रुपमा बुझाउँदै आएका छौं ।’
बुटिक एअरपोर्ट बनाउने अभियानका क्रमममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै खर्च, योजनामा पहिलो चरणको काम गरिरहेको छ । महाप्रबन्धक क्षेत्रीका अनुसार पहिलो चरणमा ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । ४५ करोडसम्म खर्च गरेर नेपाली मौलिकता झल्किने विमानस्थल बनाउने योजना हो । महाप्रबन्धक क्षेत्रीले तत्कालका लागि ७ करोड रुपैयाँबाट काम भइरहेको जानकारी दिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘बुटिक’ बनाउने अभियानअन्तर्गत खास ठूलै काम गरेको दावी महाप्रबन्धक क्षेत्रीको छैन । भन्छन्, ‘हामीले नेपाली मौलिकता झल्किने सामान्य काम नै गरेका हौं । त्यही सामान्य भनिएका काम पनि विदेशी आगन्तुककालागि नयाँ लाग्छन् ।’
उनका अनुसार विमानस्थलभित्र आगमनमा भरिएका तामाका गाग्रीहरु, गरुडले नमस्कार गरेको आकृतिआदि राखेका छौं । जुन विदेशकी लागि सेल्फि पोइन्ट भएको छ । हालै गैंडा र गैंडाको बच्चाको मूर्ती राखिएको छ । क्षेत्री भन्छन्, ‘एक सिंगे गैंडाको मूर्तीले हरेक विदेशीलाई आफू नेपाल आएको महशुस गराउँछ । किनभने एक सिंगे गैडा नेपालमा मात्रै पाइन्छ ।’
विमानस्थलभित्र आगमी दिनमा जति पनि सामाग्री थपिन्छन्, ति सबैमा नेपाली कला, संस्कृति, मौलिकता झल्काउने गरी डिजाइन गरेर राखिन्छ । जस्तो कि धारा नै जडान गर्नु परेमा टुटीको डिजाइनमा नेपाली कला मिसिएको हुनुपर्छ । खर्च पनि धेरै नलाग्ने र त्यसले विदेशीहरुमा विशेष इम्प्रेसन दिने भएका कारण यस्तो गर्न लागिएको हो ।
क्षेत्री भन्छन्, ‘दिल्ली, दुवईको जस्तो विमानस्थल बनाउने हाम्रो सामर्थ्य छैन । हामीसँग पुर्खाहरुले छाडेर गएको कला, संस्कृति र परम्पराहरु छन् । ती सम्पदा मिसाएर भौतिक संरचना बनाउन सक्यौं भने त्यो अनुपम नै हुन्छ । यहि भएर हामी बुटिक एअरपोर्ट बनाउने अभियानमा छौं ।’